Kaydka Aurora Cannabis oo Xadgudbaya • Dawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn cannabis Aurora Cannabis waxay wadaagaan tubta toosan
cannabisSaamiyada & DhaqaalahaSharci dejinta & Sharci dejinta
Aurora Cannabis waxay wadaagaan tubta toosan
albaabka Ties Inc. February 6 2020
maqaal by Ties Inc. February 6 2020
Saamiyada Aurora Cannabis ayaa hoos u dhacay in ka badan shan boqolkiiba maanta kadib warbixin la soo saaray oo ah in shirkaddu ay ku dhawaaqi doonto qorshe ay shaqada uga ceyrinayso XNUMX boqolkiiba shaqaalaheeda si loo badbaadiyo kharashaadka.
Horraantii toddobaadkan, Tilray Inc. ayaa ku dhawaaqay sidoo kale in ay gubi doonto boqolkiiba toban shaqaalaha. Automationku waxay umuuqataa inay tahay erayga furaha qaybta xashiishadda. Soosaarayaasha haramaha waxay rabaan inay badbaadiyaan kharashaadka iyagoo jarjaraya shaqaalaha haatan jira.
"Labada shirkadoodba hadda waxay ku socdaan waddo aad u adag oo loo maro faa'iidada, waxay leeyihiin raadad aad u ballaaran, taariikh maalgashi dagaal leh waxayna u badan tahay inay u baahan doonaan inay soo ururiyaan raasamaal mustaqbalka dhow," ayay qoreen falanqeeyayaasha Owen Bennett iyo Ryan Tomkins.
Shirkadaha Xashiishka ayaa ah dhibbanayaashu hannaanka shati siinta adag, taas oo yareynaysa iibka iyo faa iidada. Yaraanta dukaamada xashiishadda ayaa u suurta gelisay suuqa madow inuu carqaladeeyo ganacsiyada sharciga ah. Sidaas darteed, soo-saareyaal cannabis badan ayaa la halgamaya maal-gashi la'aan. Waxay magangalyo ka raadiyaan shaqooyin dhimis iyo dib u eegis heshiisyada. Sidee ayey suuqa uga jawaabi doontaa iyo magacyo kale oo waaween warshadaha xashiishadda sida Canopy Growth Corp. (CGC) raaca tusaalahooda?
Akhri wax dheeraad ah marketwatch.com (Source, EN)
Ka dib markii xashiishka sixirka likaha iyo keta guud ahaan daawo ahaan?
3 siyaabood oo xiiso leh oo tignoolajiyada u horseedayso warshadaha xashiishadda
Cilmi baaris la sameeyay 2020 ayaa muujineysa in THC...
Coronavirus-ku wuxuu sii kordhinayaa...